Beelaha Dir oo Dalbaday in lagu Daro Saxiixayaasha “Roadmap-ka” | Anti-Tribalism
← Shirkii Garoowe oo Maanta la Filayo in la soo Gaba Gabeeyo Xiilli aan la Dhamayn Ajandhihii Shirka oo la Isku Maan Dhaafay.
Shirka Garowe: Xildhibaanadii Shirka Joogay oo Shaaca ka Qaaday inay Berito Muqdisho Tagayaan iyo Mooshin ka Dhan ah Raysul Wasaare Gaas (Wararka ugu Dambeeya) →
Beelaha Dir oo Dalbaday in lagu Daro Saxiixayaasha “Roadmap-ka”
Xubno ka socda beelaha Dir oo ka qeybgalaya shirka Garowe 2 ayaa caawa iyaguna markood soo gudbiyey shuruud ah in xubin loogu daro saxiixayaasha roadmap ee loo yaqaano [six signatories] ama lixda saxiixayaasha qorshaha roadmap-ka. Beesha Dir waxay sheegatay in lixda saxiixayaasha roadmap-ka aysan xitaa xubin ku lahayn halka beelaha kale ay leeyihiin labo xubnood iyo ka badan, waxayna madasha shirka Garowe ka jeediyeen in taasi cadaalad daro tahay.
– Waxay soo qaateen in Madaxweyne Shariif, C/qaadir Macalin Nuur oo Ahlusuna ah iyo Madaxweyne Caalin oo hal reer ka soo jeeda ay ku wada jiraan saxiixayaasha roadmap-ka oo bishii Sebteembar Muqdisho lagu saxiixay.
– Waxay kaloo soo qaateen in Raysul wasaare C/weli Gaas iyo Madaxweyne Faroole oo isku qoys ah ku wada jiraan saxiixayaasha.
Doodan ayaa waxay u muuqatay mid macquul ah, waxayna xitaa soo jiidatay xubnihii beesha caalamka ee shirka fadhiyey. Walow ay adag tahay sida hadda wax looga qabto.
Lixda saxiixayaasha roadmap-ka ayaa kala ah; Madaxweyne Shariif, Shariif Xasan, raysul wasaare C/weli Gaas, madaxweyne C/raxmaan Faroole, madaxweyne Caalin iyo Ahlusuna oo uu u saxiixay C/qaadir Macalin Nuur [oo loogu yeero [Khaliif C/qaadir].
Lixda saxiixayaasha roadmap [six signatories] waxay leeyihiin muhimad gaar ah, waayo waa kuwa hadda beesha caalamka u taqaano “stake holders” ama DADKA AY TALADA DALKA KA GO’DO.
Lixdan waa kuwa ku martiqaadan shirka London ee dhacaya 23-ka Febraayo, waana kuwa si tooska ah ula hadla beesha caalamka. sidaasi awgeed ayaa beelaha qaar u rabaan inay iyaguna meesha kursi ku yeeshaan si aan xagga sare looga qadinin.
DHINACA KALE, Waxaa weli taagan ismari waagii ka dhashay wafdigii Ahlusuna oo saacad ka hor shirkii Garowe isaga baxay ka dib markii ay shuruudo keensadeen.
Goordhowna waxaa shirka ka baxay, xildhibaanada baarlamaanka KMG oo dhanka Shariif Xasan ka socday kuwaasoo shirka uga qeybgalay xildhibaano hab qabiil ku socda.
Tirada xildhibaanadan ayaa ah 36 mudane, Waxay caawa iyaguna keensadeen shuruud ay ugu weyn tahay labo qodob;-
1- In xildhibaanadooda lagu daro Golaha Dastuuriga “Constituency Assembly” ee ka kooban 1,000 ruux kuwaasoo shirkii hore ee “Garowe 1? lagu go’aamoyey (Waxaa caawa soo baxday in xildhibaanada ayan ku jiri doonin golaha dastuuriga).
2- In ay helaan ballanqaad cad oo ah inay baarlamaanka dambe ee la sameynayo June 2012 ay ku jiri doonaan.
Labadan shuruudood waxaa diiday ergadii dhanka Puntland oo gaashaanka u daruurtay, waxayna dhalisay in 36-ka xildhibaanada ay dibadda ka tagaan shirka.
MOOSHIN KA DHAN AH XUKUUMADDA GAAS
Xildhibaanada waxay si cad caawa u sheegeen in ay berito u duuli doonaan Muqdisho ayna toos ugu biiri doonaan baarlamaanka Madoobe Nuunow hogaamiyo, ka dibna lagudageli doono mooshin xilka looga qaadayo Raysul wasaare C/weli Gaas iyo xukuumadiisa.
Shariif Xasan oo goobta jooga ayaa isku dayey inuu saaxiibadiis gaar ula hadlo laakiin waxba kama soo bixin, waxayna u muuqataa in Shariif Xasan uu ku raacsan yahay mudanayaasha inay haddaxaqooda dhacsadaan inta arintu weli ceyrinka tahay.
HAJANAABAD KA TIMID BEESHA CAALAMKA
Xubnaha beesha caalamka ee shirka jooga ayaa caawa digniin u gudbiyey xildhibaanada shirka ka baxay, waxayna u sheegeen in haddii ay Muqdisho tagaan oo ay ku biiraan baarlamaanka Madoobe Nuunow iyagana loo aqoonsan doono “kooxda qas wadayaasha” ama “spoilers”. Warar hoose ayaa sheegaya inuu jiro go’aan ah in shirka Garowe ka dib la soo saari doono liis ay ku qoran yihiin xubnaha horboodaya baarlamaanka Madoobe Nuunoow kuwaasoo lagu soo rogi rabo cunaqabateyn safarka ah laguna shaabadeyn doono “qas wadayaal”.
Hanjabaadan uma eka mid cabsi gelisay xildhibaanada safka Shariif Xasan ku jiray ee caawa shirka isaga baxay.
GALMUDUG OO FARAXSAN
Galmudug waxaa caawa loo meel mariyey in loola dhaqmo sida maamul [state] la mid ah Puntland. Tani waxay Galmudug siineysaa fursad la mid ah tan Puntland. Waayo Galmudug waxay illaa shalay diidaneyn in haddii arinta goboleysi noqoto markaasi lagu riixo dhul yaraan (maadaama qeyb ka mid ah Mudug oo kaliya ay ka taliso).
Markan Galmudug waxa u muuqataa inay ku qanacsan tahay. Laakiin qodobkaasi waa uun qoraal kaliya ee waxaa tuhun ka jiraa in Puntland ay qodobaasi aoo celiso oo sheekada markale dib ugu laabato halkii saakay joogtay.
Dhanka kale ergadii Ahlusuna oo iyaguna saacad ka hor shirka ka baxay ayaan weli la heyn iyadoo haatan saacadu ku sii siqeyso 11:00 fiidnimo. Waxaana suurtagal ah in shirka berito uu u dhaco walow ay jiraan dadaalo socda daal fara badanina uu dadka hayo.
Posted on February 17, 2012, in Anti-Tribalism. Bookmark the permalink.	Leave a comment.